China Janitor Cart-D011-1 orinasa sy mpanamboatra | Jinqiu
Ny Carte Janitor tsotra-Magic dia natao haharitra! Tehirizo amin'ny toerana iray ny enta-mavesatrao miaraka amin'ny rafitra fanadiovana finday faratampony. Ity sarety marobe ity dia misy talantalana telo misy sisiny miakatra, tahony ary fitoeran'ny kifafa miaraka amin'ny farango hahazoana manalefaka amin'ny fitehirizana sy fitaterana ireo entana.
Alefaso mailaka aminay Sintomy ho PDF
D011-1 dia karazana kalesin'ny mpiambina misy fonony.
Anisan'izany ny rakotra fitehirizana sisin-tany miisa 3, fitaovana fanadiovana madio, fotodrafitrasa manome toerana ampy hitahirizana harena, hooks amin'ny lafiny roa mba hanamboarana pel, kifafa ary vovoka afaka hamonjy habaka
Kitapo fanangonana fako fahaiza-manao sy rakotra fako hisorohana ny fivoahan'ny fofona
Mampiasà fitaovana PP adidy mavesatra sy vy vy famaohana plastika hisorohana ny vaky, ny flaking ary ny harafesina mahazaka plastika hatramin'ny 330 pounds.
Kodiarana 2 manerantany eo aloha mba ho mora ampiasaina ary mora ny miampita ny faritra rehetra, raha fiara fiarovana kodiarana lehibe 2 kosa manakana ny fivezivezena
Mora ny manadio sy mitahiry-manangona fotsiny na manala ny vy roa amin'ny sehatra antonony, mitsitsy fotoana sy toerana
D-011-1 Sarety mpanadio
Ny Carte Janitor tsotra-Magic dia natao haharitra! Tehirizo amin'ny toerana iray ny enta-mavesatrao miaraka amin'ny rafitra fanadiovana finday farany ambony. Ity sarety marobe ity dia misy talantalana telo misy sisiny miakatra, tahony ary fitoeran'ny kifafa miaraka amin'ny farango hahazoana manalefaka amin'ny fitehirizana sy fitaterana ireo entana. Ireo sarety dia namboarina tamin'ny polyethylene maharitra maharitra ho an'ny fampiasana maharitra. Ny sarety dia mora miangona miaraka amin'ny fitaovana miaraka aminy ary torolàlana ho an'ny fametrahana haingana.
Previous: Carteur Janitor- D-011
Manaraka: 24L / 32L Side press press trollley tokana --H0101 / H0102
Carte de jeneraly Continental
Carte Janitor kely
Trolley Janitor Cart
Fitaovana fikirakirana Caddy B-039B
36L Side press press trolley tokana B-040
660L Carto ivelany fako-B109
Bin-Bolling Rolling Bin-B001-B004 / B001A-B004A